अमेरिकी गोली काण्डमा पक्राउ परेका युवा को हुन्? – Hamrosandesh.com
अमेरिकी गोली काण्डमा पक्राउ परेका युवा को हुन्?
१९ साउन, वाशिङटन ।
अमेरिकामा २० जनाको मृत्यु हुनेगरी सपिङ कम्प्लेक्समा गोली चलाएको आंशकामा प्रहरीले पक्राउ गरेका युवा को हुन् भन्ने बारेमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। टेक्ससको अलेन क्षेत्रका प्याट्रिक क्रुसियस नामका २१ वर्षीय युवा सो प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। स्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै सीबीएस न्यूजले जनाएअनुसार अनुसन्धाता प्याट मिल्टनले ती युवालाई ‘व्याकूल युवा’को संज्ञा दिएका छन्। उनी एक्लै बस्न रुचाउने खालका थिए।
उनले लेखेको एउटा सामग्रीका कारण प्रहरीले उनलाई सो घटनामा संलग्न भएको प्रमाणका रुपमा लिएको छ। कानुन कार्यान्वयन निकायका अधिकारीहरुले बताएअनुसार सीसीटीभीमा बन्दुकधारी वालमार्टमा हिंडिरहेको देखिएको छ। सुरक्षानिकायले पाएको लिखित सामग्री ‘४चान’ नामक एक अनलाइन फोरममा प्रकाशित छ। सो फोरममा अज्ञात रुपमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने गरेका छन्। सो व्यक्तिले आफूले लेखेको सामग्रीमा टेक्सासमा रहेका हिस्पानिक मानिसको निन्दा गरेका छन्।
हिस्पानिक भन्नाले त्यहाँ रहेका स्पेनिस भाषा बोल्ने खासगरी मध्य र दक्षिण अमेरिकी देशका नागरिकलाई चिनिन्छ। उनले त्यहाँ हिस्पानिकहरुका कारण रोजगारीको अवसर गुमेको भनेर आलोचना गरेका छन्। त्यसैगरी देशका मुख्य दुई राजनीतिक दलको पनि आलोचना गरिएको छ। त्यो सामग्रीमा न्यूजिल्याण्डमा क्राइस्ट चर्च मश्जिद गोली काण्डको प्रसंग समेत उल्लेख छ। त्यो घटनामा ५१ जना मानिस मारिएका थिए।
शनिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख ग्रेग एलेनले सो कागजातको प्रसंग समेत उल्लेख गरेका थिए। उनले गोलीकाण्डमा सो कागजातको पनि कुनै न कुनै सम्बन्ध हुन सक्ने बताएपनि त्यसको थप व्याख्या गरेनन् ।उनले यसलाई हेट क्राइमघृणाको अपराध हुन सक्ने बताएका थिए। अर्को छुट्टै पत्रकार सम्मेलनमा अल पासोका प्रहरी सूचना अधिकारी रोबर्ट गोमेजले शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेको बताएका छन्।
सो गोली काण्डमा अन्य बाहिरका मानिसको हात रहेको भन्ने प्रसंग उनले अस्वीकार गरेका छन्। सिलो भिस्टा मल र वालमार्ट जहाँ गोली चलाइएको थियो ती स्थान अहिले सुरक्षित भएपनि बन्द गरिएको गोमेजले बताएका छन्। ती युवा म्याककिनीको कोलीन कलेजमा पढेको खुलासा भएको छ। उनी सन् २०१७ देखि सन् २०१९को वसन्त ऋतु सम्म त्यहाँ थिए। कलेजका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट डा निल मात्किनले एक वक्तव्य जारी गर्दै यो समाचारबाट कोलीन कलेज दुःखी र त्रसित भएको जनाएका छन्।
उनले वक्तव्यमा कोलीन कलेजले घटनाको छानबिनका लागि पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने जनाउँदै अनुसन्धानको लागि राज्यका संघीय अधिकारी,गभर्नर र पीडितहरुको साथमा रहेको जनाएका छन्।